Submissions for the coming July Issue are welcomed | ကိုသင်ကာ . . . . Ko Thinker
← ခရီးထွက်နေဦးမယ် နှင့် Future Posts
June 14, 2008 · 9:12 am
Submissions for the coming July Issue are welcomed
ပထမ Issue မှသည် ယခုတတိယ Issue အထိ အားတက်သရော ဖတ်ရှု အားပေး၊ ဝေဖန်ကြသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ July လအတွက် စာမူများကို စတင် လက်ခံနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
စာမူပေးပို့လိုသူများ existence.magazine@gmail.com ကို စာမူပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Submissions for the coming July Issue are welcomed. Please ontact existence.magazine@gmail.com for further information and submissions.
Your comments, suggestions and contributions are greatly appreciated…
One response to “Submissions for the coming July Issue are welcomed”
အလယ်တန်းလောက်ကတည်းက ၀င်ခဲ့တဲ့ စာရေးချင်တဲ့ ပိုးကို ပြန် အသက်သွင်းခွင့် ပေးတဲ့ Existence မဂ္ဂဇင်းကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
လတ်တစ်လော စာမေးပွဲ ကိစ္စတွေကြောင့် ကျွန်တော် အသစ်မရေးနိုင်သေးပေမယ့် နောင်များမှာ ဆောင်းပါး အသစ်တွေ ရေးပြီး အကောင်းဆုံး ပေးပို့နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားပါ့မယ်။
လက်ရှိကျွန်တော် ရေးပြီးသားဖြစ်တဲ့ ဆောင်းပါး ၂ ပုဒ်ကို PDF နှင့် ရော Word File နှင့်ပါ ၂ မျိုးလုံး (ဘယ်လိုဖိုင် ပို့ရမယ် မသိတဲ့ အတွက်) ပေးပို့လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်မှာ ဖော်ပြပြီးသား ဖြစ်ပေမယ့် Existence မှာ ထပ်မံဖော်ပြခွင့် ရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် အလွန်ပဲ ၀မ်းမြောက် ဂုဏ်ယူမိမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း လေးစားစွာ ပြောကြားလိုက်ပါရစေခင်ဗျား။